Guushii Xalay, Inay Baqayaan Kooxaha Weyn & Klopp Oo Fariin Digniin U Soo Diray Real & Barca » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Guushii Xalay, Inay Baqayaan Kooxaha Weyn & Klopp Oo Fariin Digniin U Soo Diray Real & Barca
Tababaraha naadiga Liverpool ee Jürgen Klopp, ayaa waxa uu sheegayaa in natiijadii ay xalay kusoo xaaqeen kooxda Spartak Moscow, oo ahayd 7-0 ay ahayd mid cajiib ah:- wuxuuna sheegayaa inay fariin ay utahay kooxaha waa weyn.
Reds ayaa waxay guushaas ay kasoo gaartay naadigaas ka socotay wadanka Ruushka ay siisay inay usoo baxdo wareega 16-ka ee Champions League;- wuxuuna sheegayaa inay ku farax san yihiin inay usoo baxaan.
Mar uu ka hadlayay shirka jaraa’id ee kulankaan kadib ayaa waxa uu shaaciyay Klopp inay yihiin kuwa diyaar u ah inay wajahaan koox kasta, wuxuuna wacad ku maray in aysan jirin koox ay ka baqayaan.
Wuxuu yiri: “Antonio Conte [Macalinka Chelsea] wuxuu yiri, shalay in aysan jirin koox laga baqo, waxaana nahay ku aanan xiiseyneen inay muujiyaan arinkaas, waxaana udiyaarsan nahay inaan la dheelno koox kasta.
Wuxuu raaciyay: “Inaan kusoo badino [7-0] waxay tahay mid cajiib ah, waxaana ay digniin utahay kooxa kale, ee tartankaan ku guuleysanaya sanadihii ugu dambeeyay, waxaaan nahay kuwa soo laabtay.
Isku aadka wareega 16-ka ee Champions League, ayaa waxaa la sameyn doonaa Talaada soo aadan, waxaana sida uu qorshuhu yahay la filan karaa wax kasta, iyadoona ay u badan tahay in la heli doono kulamo aad u adag.